Adiresy IP anao manokana 192.168.8.2 dia atokana any amin'ny masinina ao anaty tambajotra tafiditra ary tsy misy haingana hihaza amin'ny Internet. Mba hahafahana manome adiresy IP ao anaty fikambanana sy tambajotra dia napetraka ny adiresy voatokana. Tsy misy ezaka ny mamantatra adiresy IP manokana amin'ny famaritana ny sary tena izy.
IP 192.168.8.2 dia IP manokana nitazona ny admin console an'ny router. Ity miampy IP fanampiny toa ny 192.168.123.1, 192.168.77.1, 192.168.8.1, sns. Dia ekena tanteraka amin'ny fenitra manerantany ho an'ny IP router. Izy io koa dia antsoina hoe "IP Default Gateway".
Ny adiresy IP https://192.168.8.2 dia voarakitra miaraka amin'ny Internet Allotted Nomery Authority IANA ho ampahany amin'ny tambajotra voatokana 192.168.8.0/24. Ao amin'ny elanelana manokana ny adiresy IP dia tsy voatendry ho an'ny vondrona manokana ary afaka mampiasa ny adiresy IP ny tsirairay raha tsy misy ny fifanarahana rejistra ao an-toerana araka ny voalaza ao amin'ny 1918 RFC, miavaka amin'ny adiresy IP isam-pokontany.
Miditra amin'ny pejy Admin 192.168.8.2
Ampidiro fotsiny ny 192.168.8.2 ao anaty boaty adiresin'ny browser web. Azonao atao ny mampiasa ny pejy admin ary miantoka ny fidirana Passkey aza ianao. Amin'ny alàlan'ny famelezana ny rohy 192.168.8.2 dia azonao atao ihany koa ny mandray azy io.
Ho azonao koa ny valin'ny fikarohana rehetra ho an'ny adiresy IP tsy miankina 192.168.8.2. Raha mitady hanongotra ny fidirana ho an'ny router tsy misy tariby ianao, ny plug-in na ny modem dia azonao ampiasaina amin'ny alàlan'ny tsindry fotsiny amin'ilay rohy. Ho an'ny TP Link, D-Link, na ny router tsy misy tariby Netgear ireo mpampiasa anarana na teny miafina fampiasa indrindra dia ny 'fananganana' na 'admin', azonao atao ihany koa ny mamerina ny toerana misy anao eo an-damosin'ny masinina. Raha tsy mandeha io dia azonao atao ny misafidy ny hamerina ireo router. Mba hanaovana izany dia tokony tsindrio & tazomy ny bokotra famerenana mandritra ny 20 segondra. Aorian'izany dia miverina miverina amin'ny toeran'ny orinasa ianao ary mankasitraka anao hiditra amin'ny andinindininy hita eo amin'ny sticker.
Adiresy IP 192.168.8.2 dia voarakitra miaraka amin'ny Internet Allocated Number Authority IANA ho toy ny fizarana tambajotra tsy miankina 192.168.8.0. Ao amin'ny habaka manokana ny adiresy IP dia tsy tendrena amin'ny fiarahamonina voafetra, ankoatry ny ISP, ary ny olona rehetra dia afaka mampiasa an'io adiresy IP io raha tsy misy ny marimaritra iraisan'ny rezistra amin'ny Internet.
Na izany aza, tsy azo ampitaina amin'ny alàlan'ny Internet ny fonosana IP, raha tsy izany, raha toa ka maniry hiditra amin'ny Internet ny tambajotra tsy miankina iray dia takiana amin'ny alàlan'ny mpampitohy adiresy (antsoina koa hoe NAT) vavahady, na mpizara proxy.
Ny vavahady fanoharana Nat dia mety ho router tsy misy tariby na mifandray azonao avy amin'ny mpivarotra broadband. Ny adiresy IP raikitra amin'ity fitaovana ity eo amin'ny tamba-jotra dia manomboka amin'ny 192.168.8.0/24 dia mety ho 192.168.8.254 na 192.168.8.1 miankina amin'ny loharano. Ny interface web gateway dia tokony ho azo alefa amin'ny alàlan'ny protokol Hypertext Transfer Protocols HTTP hafa ary protokol HTTPS azo antoka Hypertext Transfer Protocol. Ho fanandramana an'io dia mila miditra ao amin'ny boaty adiresy 'http: // adiresy ip' na 'https: // ip address' an'ny tranokala nofidinao ianao ary mitovy amin'ny fidirana Google Chrome na Mozilla Firefox miaraka amin'ny solonanarana sy PW natolotry ny mpamatsy anao .